1. ကမာခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 2. Oyster Peptide ဆိုတာဘာလဲ။ ၃။ Oyster Peptide ၏ Functions များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ၄။ အခြားလိင်ဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Oyster Peptide ရဲ့အားသာချက်များကဘာလဲ။ ၅။ Oyster peptide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ ကမာ peptide သောက်သုံးသော? ၆။ Oyster Peptide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလား။ 3. ကမာ Peptide အမှုန့်လျှောက်လွှာ? ၈။ နောက်ဆုံးသောကမာအကြောင်းအရာ Oyste ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ...
1. Enfuvirtide ဆိုတာဘာလဲ။ 2. Enfuvirtide လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား? 3. Enfuvirtide ကို HIV တွင်အသုံးပြုခြင်း ၄ ။ enfuvirtide အမှုန့်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ 4. Enfuvirtide သောက်သုံးသော? ၆။ enfuvirtide ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကားအဘယ်နည်း။ ၇။ enfuvirtide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်ထားသင့်သလဲ။ ၈။ Enfuvirtide အမှုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနနှင့်အသုံးချမှုများ ၁။ Enfuvirtide ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Enfuvirtide (5-6-7) သည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။